Thursday June 23, 2022 - 12:35:17
Baaritaanno cusub oo la sameeyey ayaa banaanka soo dhigay sida shirkado Ameerikaan ah u fangareeyaan oo ay lacago maaliyadeed ugu taageeraan kooxo ka dhisan dalka Turkiga, si isbedel loogu sameeyo hogaanka Turkiga oo gacanta ugu jira hogaamiyaha Cilmaaniga Rajab Dhayib Ordogan.
Dib u eegis lagu sameeyey dukumentiyo maaliyadeed oo ay leedahay hay’ad fadhigeedu yahay dalka Maraykanka oo sheegata iney taageerto isbedellada dimquraadiga ayaa muujinaya sida hay’adaas ay taageero maaliyadeed u siisay kooxo Turki ah oo ku sugan gudaha Maraykanka iyo xitaa Turkiga, si isbedel loogu sameeyo hogaanka xisbiga talada haya.
Sanadihii 2020-ka iyo 2021-da, ayaa hay’adda lagu magacaabo hay’adda qaranka ee Dimuqraadiyadda, magaceedana loo gaabiyo NED, kana dhisan Maraykanka, waxay lacago usoo direy shakhsiyaad isku howley dhisidda shabakad loogu magacdaray isbedel doonka, taasoo shaqadeedu tahay in talada dalka Turkiga laga saaro Ordogan.
Hay’adahan oo ah hay’adaha Maraykanka u qaabilsan maalgelinta arimaha dibadda iyo taageerada kooxaha ay la dhacsantahay dowladda Maraykanka, fadhigeeduna yahay magaalada Washington waxay malaayiin dollar oo minxooyin laga dhigay siisay siyaasiyiin Turkish ah, si loogu maalgeliyo dhaq-dhaqaaqyo Siyaasi ah oo laga sameeyo gudaha Turkiga.
Sanadkii 2021-da, ayay hay’adana waxay bixisay lacag dhan 2 million 600 kun oo dollar, taasoo lagu guuleystay in lasoo gaarsiiyo gudaha Turkiga, gacantana loogu shubo siyaasiyiin Turki ah, si ay ugu maalgeliyaan olole siyaasadeed ka dhan ah Ordogan iyo xisbigiisa.
Lacag kudhow 41 kun oo dollar ayaa la siiyay min 9 urur oo ka dhisan gudaha Turkiga, kuwaasoo ku howlan arimaha siyaasadda, waxaana dhamaantooda halkudhig u ah isbedel doon, ujeedkooduna waa in doorahsada madaxtinimada looga guuleysto ninka lagu magacaabo Ordogan.
Maadaama dowladda Turkiga aaney ogoleyn in maalgelinno xaga dibadda ah la siiyo hay’aadka siyaasiga ah, waxaa dukumentiyadan la heley laga qariyay magacyada hay’adaha ka dhisan Turkiga ee heley maalgelinta maaliyadeed ee ugu timid hay’adan Ameerikaanka ah ee taageerta waxa loogu yeero DImuqraadiyadda iyo isbedellada.
Hay’adda qaranka ee maalgelinta Dimuqraadiyadda ee NED, waxay horey u dhalisay buuq iyo doodo hareeyay caalamka, wixii ka dambeeyey kacdoonnadii guga carbeed, xilligaas oo ay taageero ballaaran siiyay ururo cilmaani ah oo ka dhisan wadamada Tuunis iyo Masar, si ay uga hortagaan tawajuhii muslimiinta ee ahaa in talada loo dhiibo hogaamiyaal dadka ku dhaqa Shareecada Islaamka.
Dukumetniyadan cusub ee hadda warbaahinta loo soo dusiyay, waxaa lagu arkayaa sida hay’adda NED ay isugu howshey iney faragelin ku sameyso siyaasadda arimaha gudaha ee Turkiga, iyadoo la taageerayo axsaabta mucaaradka.
Sida kucad dukumentiyadan la heley, waxay hay’adda NED ku maalgelisay xisbi aan magaciisa la shaacin oo kajira Turkiga lacag dhan 147 kun oo dollar, si dib u habeyn loogu sameeyo hay’adaha dowladda ee fulinta iyo kuwa sharci dejinta ee dalka Turkiga.
Warqadda decumentiga waxay ku sheegeysaa hay’adda lacagta bixisay in minxdadan loo bixiyay sidii loo dhiiragelin lahaa sarreynta qaanuunka, dhiiragelinta xukunka toosan, iyo isla xisaabtanka, iyadoo loo marayo in isbedel iyo dib u hagaajin lagu sameeyo hay’adaha fulinta iyo kuwa sharci dejinta ee Turkiga.
Taageero kale oo maaliyadeed oo la siiyay xisbi aan magaciisa la sheegin oo ka dhisan Turkiga, waxay hay’adda NED bixisay lacag dhan 290 kun iyo 800 oo dollar, si loo taageero warbaahinta madaxa banaan, barta Internetka ayaana laga hirgeliayy website quseeya wariyaasha, si loo taageero warbaahinta Turkiga, loona difaaco waxa loogu yeero xurriyada Saxaafadda, sida ay ku cad dukumentiyada la helay ee ay leedahay hay’adda NED.
Xilli dowladda Maraykanka ay taageereyso sida ay hadalka u dhigeyso warbaahinta ku yaala dalalka kale, iyadoo lacagaha u marsiineyso hay’adda NED oo hoostagta dowladda, wuxuu Maraykana culeesyo kusoo rogaa warbaahinta ka howlgasha gudaha Maraykanka ee ay hirgeliyeen shakhsiyaad aan Ameerikaan ahayn.
Waxa loogu yeero wasaaradda Cadaaladda ee Maraykanka, ayaa warbaahinta gudaha Maraykanka waxay kusoo rogtey culeesyo xaga shaqada ah, iyagoona u aqoonsatey iney yihiin wakiilo Ajnabi, loona baahanyahay in lixdii biloodba ay soo gudbiyaan warbixin faafaahsan oo ku aadan howlaha ay ka hayaan gudaha Maraykanka.
Taageero kale oo saddexaad oo ay bixisay hay’adda NED, lana siiyay axsaabta mucaaradka ee Turkiga, waxay dhantahay 40 kun oo dollar, waxaana lagu bixiyay sidii loo taageeri lahaa waxa loogu yeero xurriyadda dadweynaha iyo in dadku ay dhisan karaan Jamciyaad.
Si loo ogaado waxqabadka iyo in mashruuca uu u hirgelay sidii la rabay, waxaa xisbiga qaatey taageerada lagu amray inuu soo gudbiyo waxqabadkiisa, isagoo u gudbinaya hay’adaha sheegta iney u doodaan xuquuqda Aadanaha ee caalamiga ah.
Taageero kale oo dhan 40 kun oo dollar, waxaa la siiyay hay’ad sheegtay iney ka shaqeyso xoojinta afkaarta Dimuqraadiyadda, taasoo baraha Internetka ka furtey goobo lagu niqaasho, oo la isku dhaafsado aragtiyada la xiriira horumarinta Dimuqraadiyadda oo ah fakar gaalnimo ah oo ka hor imaanaya Shareecada Islaamka, sida culimada muslimiintu marar badan cadeeyeen.
Hay’adda ayaa la faray sidoo kale iney soo saarto iyadoo kaashaneysa warbaahinta iyo Akademiyada Iclaamka ee Turkiga maqaalaad iyo muuqaallo yar yar oo ka hadlaya dimuqraadiyada, si gaar ahna u beegsanaya dhalinyarada, waana in sidoo kale mawaadiicdaas lagu soo bandhigo xaaladaha adag ee kajira dalka Turkiga.
Waxay kaloo hay’adda NED taageero maaliyadeed siisay shirkado iyo maraakiz diraasadeed ka furan gudaha Maraykanka, kuwaasoo dhankooda iyagoo kaashanaya hay’ado maxalli ah olole siyaasadeed ka fulinaya gudaha Turkiga.
Machadka caalamiga ee wadahadalla siyaasadeed iyo in dhalinyarada lagu daro liiska dadka go’aannada waaweyn qaadanaya, ayaa qaatey lacag dhan 700 oo kun oo dollar, waxaana lacagtaas lagu siiyay inuu sameeyo diraasaat, sidoo kalena dhalinyarada Turkiga u diro sameynta baaritaanno iyo qiimeyn ku aadan siyaasadda Turkiga, iyagoo natiijada baaritannadoodana u gudbinaya axsaabta waaweyn ee mucaaradka Turkiga.
Taageero kale oo gaarsiisan 600 oo kun oo doolar ayaa la siiyay hay’ad fadhigeedu yahay Turkiga, waxaana mashruucaas lagu maalgelinayay in la dhiso canaasir awood u leh ilaalinta Dimquraadiyadda, kuwaasoo loogu magacdaray canaasirta isbedel doona, dukumentiyada la heleyna lagu cadeyn waxa loola jeedo canaasirta isbedel doonka.
Dowlado badan oo ku yaala caalamka ayaa horey waxay dalalkooda kaga mamnuuceen hay’adda NED, iyagoo ku eedayay iney ku howlaneyd falal lagu carqaladeynayo amniga iyo siyaasadda gudaha ee dalalkaas.
Dowlado kale waxayba ku eedayeen hay’adda NED iney tahay dabool lagu qarinayo dhaq-dhaqaaqyo sirdoon iyo xogo raadin ah oo uu Maraykanku ka sameynayay wadamadaas, waxaana sanadihii u dambeeyay dhulka galay sumcadda hay’adda, taasoo keentay in laga mamnuuco wadamo badan.
Sideetamadeeyadii ayaa waxaa hay’adan aas-aasey madaxweynihii Maraykanka ninka lagu magacaabo Regon, waxaana xilligaas loogu talagalay iney saameyn ku yeelato caalamka, Maraykanka iyo dowladaha caalamkana isku xirto, iyadoo hoos loo dhigay awoodda xilligaas Ruushku ku lahaayeen caalamka.
Hay’adda waxay sanadihdii u dambeeyey aad ugu dhaweyd xisbiga muxaafidka mayalka adag ee Maraykanka, si gaar ah madaxweynihii Maraykanka Bush-ka inanka ah, waxay kaloo hay’adda xiriir dhow la leedayahy hay’adda Sahyuuniyadda caalamka ee ay hirgeliyeen Yahuudda.
Inkastoo hay’adda NED taageerada maaliyadeed ay boor qaris uga dhigto taageerada dimquraadiyadda, horumarka dhalinyarada iyo arimaha bulshada, hadana waxay masuul ka ahayn qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhacay wadamo dhowr ah oo katirsan caalamka, waxaana lagu tilmaamaa iney tahay garabka Maraykanka ee faafinta fowdadada iyo xasilooni darrada.
Mucaaradka Somaliland oo la kulmay Muuse Biixi.